Nieves Concostrina: sheeko isku mid ah, hab kale oo loo sheego | Suugaanta Wararka
John Ortiz | 08/01/2022 21:45 | Qorayaasha, Buugaag, Novela
Xigasho Nieves Concostrina
Nieves Concostrina waa qoraa reer Madrid ah oo loo aqoonsaday habkeedii asalka ahaa ee ay u sheegi jirtay dhacdooyinka taariikhiga ah. Tan iyo markii la aasaasay, ujeeddadeedu waxay ahayd inay soo bandhigto dhacdooyinka iyadoo la taabto kaftan, iyada oo laga tago fikradaha qaldan ee qoraallada waxbarashada. Tusaalooyinka kan waa buugiisii ​​ugu dambeeyay: Taariikhda dhib (2021), kaas oo uu ku raaxaysan karo qof kasta oo weyn, inkastoo ay ka tirsan tahay nooca suugaanta carruurta.
Iyadoo in ka badan toban sano ay ku jirtay saaxada suugaanta. wuxuu daabacay sagaal buug. Istaag inta u dhaxaysa kuwan: Boor baad tahay (2009) iyo Sheekooyinka yaryar ee taariikhda (2009). Sidoo kale, waxa uu 40-kii sano ee uu waayo-aragnimada u lahaa raadiyaha iyo telefiishanka ka faa’iidaystay mihnaddiisa suxufinimo ee uu ku mutaystay abaal-marinno muhiim ah, sida: Villa de Madrid ee saxaafadda qoraalka ah (1998) iyo Ondas oo helay xogtii ugu fiicnayd. daaweynta 2016.
1 Buugaagta Nieves Concostrina
1.1 Boor baad tahay (2009)
1.2 Sheekooyin yar oo taariikhda ah: sheeko-xumo, macno-darro ah, algar adas iyo mamarrachadas of humanity (2009)
1.3 Dhimashada Sawirka ee Aadanaha (2012)
1.4 San Quintin iyo sheekooyinka kale ee yaryar ee Taariikhda ayaa la isku daray (2012)
1.6 Taariikhda Dhibaatada: 5 Caanood, 4 Aad u Fiican, iyo Cress (2021)
2 Ku saabsan qoraaga, Nieves Concostrina
2.1 Abaalmarinada la siiyay Nieves Concostrina
Buugaagta Nieves Concostrina
Boor baad tahay (2009)
Waa buug leh mawduuc gaar ah, ujeedo dhacdooyinka ay soo mareen meydadka shakhsiyaadka qaarkood dhacdooyin la taaban karo oo taariikhda galay. Aragtida gaarka ah, ka hor, waxay ka dhigaysaa shaqada mid magnet u ah kuwa xiiseeya. Bogaggeeda waxa ka mid ah sheekooyin tiro badan, kuwaas oo loo qaybiyey toddobada cutub ee soo socda:
Oo udgoonka quduusnimada
Falsafad iyo Waraaqo
Siyaasadda, Chevrons iyo tacaburrada
Showbiz, dhagax weyn iyo isboorti
Mid xun iyo mid kale oo wanaagsan
Waxyaabo kala duwan
Cutubka u dambeeya wuxuu ka soocan yahay inta kale nuxurkiisa; Waxay u qaybsantaa 19 qaybood waxayna leedahay sheekooyin aad u xiiso badan. Waxaana ka mid ah: “Afduubka maydka ", "Furriinka dhimashada ka dib", "Maafiyada ayaa disha", "Mid Jeweled", "Gazapos aaska" iyo "dib u soo celinta".
Hordhacii riwaayadda. qoraaga Waxa uu muujiyay: "Buuggaan waxaan kaliya doonayaa inaan ku tuso in dhimashada (dadka kale) ay noqon karto mid xiiso leh, xad dhaaf ah ama madadaalo sida nolosha lafteeda. Illahay, ama ku alla kii naga qabtaba wuu qiranayaa”. Maxaa intaas dheer, Waxa uu sharraxay sida uu u horumarinayey buuggan muddo ku dhow toban sano iyo in waayo-aragnimadiisa suxufinimo ay aasaas u ahayd.
Sheekooyinka aan ka heli karno waxaa ka mid ah:
"Alexander I, boqor dhintay oo la waayay" (1777 - 1825)
"Yooxanaa XXIII, Kaamilka ugu fiican" (1881-1963)
"Pythagoras, nin dhintay oo khiyaano ah" (qarnigii XNUMX-aad BC)
"Hooyada beenta ah ee Francisco Pizarro" (1471? - 1541)
"Aaska" kaydka "Marilyn Monroe" (1926 - 1962)
"Pablo Escobar, soo saarid caajis ah" (1949 - 1993)
Boor waxaad tahay (rustic)
Sheekooyinka yaryar ee taariikhda: sheeko-xumo, macno-darro ah, algarias iyo nacasyada aadanaha (2009)
Buuggan - kii saddexaad ee ka Madrid - ayaa la soo bandhigay ka dib markii guusha Boor baad tahay. Intii lagu jiray 13-kii cutub, Concostrina waxay si kaftan iyo kaftan leh u qeexday dhowr dhacdo oo runtii dhib badan. Sheekooyinka kala duwan ee laga sheekeeyo waxaa ka mid ah: "Algaradas", "Jaceyl, arrimaha jaceylka iyo shenanigans", "Mamarrachadas", "Mundane question" iyo "Revoltosos".
Sida shaqadeedii hore, qoraagu waxa ay isku dayday in ay si kale duwan u soo bandhigto dhacdooyinka qaar ee taariikhda aadamaha, iyada oo aan “academicism” badan lahayn, si ay si hufan u gaadho akhristayaasha. Hordhaciisa waxa uu ku dooday: "Kuwani waa istaroog yaryar oo kaliya oo loogu talagalay inay faa'iido u yeeshaan kicinta xiisaha iyo riixitaanka, waxaan rajeynayaa, inaad ka cabto ilo badan oo la bartay ”.
Sheekooyin yar oo ku saabsan ...
Dhimashada muuqaalka ah ee aadanaha (2012)
Waa shaqadii afraad ee qoraaga. Waxaa si hordhac ah loo daabacay sida Boor baad tahay II, sida ay raacdo isla xariiqda qoraalka homonymous ee 2009. Dhacdooyinka lama filaanka ah ee maydadka jilayaasha soo dhex mara waxaa ka mid ah hindise-hoosaadyo madadaalo leh ka buuxa kaftan sifada qoraaga. Intaa waxaa dheer, qaybaha qosolka leh waxaa kaabaya sawirada Forges.
"Dhafoorkii Safarka Wareega ee Joseph Haydn"
"Qofka sharafta leh ee Francisco de Quevedo"
"Muuqaalka wanaagsan ee Jaalle Lenin"
"César Borgia oo la dulmay"
Dhimashada Sawirka ah ee...
Mid ka mid ah San Quintin iyo sheekooyinka kale ee yaryar ee Taariikhda ayaa la isku daray (2012)
Waa dhacdooyin la soo uruuriyay - khaladaad iyo bahalnimo - kuwaas oo dhacay tan iyo markii qoraalku si rasmi ah u soo muuqday qiyaastii 5000 oo sano ka hor, oo siinaya fursad taariikhda la yaqaan. Si ka duwan labada buug ee kale, kani wuxuu soo bandhigayaa xaalado ka dhacay "nolosha."
Sawirka qosolka leh ee qoraaga ayaa ku sii jira sheeko kasta. Jilayaasha waxay ka tirsan yihiin dabaqado bulsheed oo kala duwan iyo meelaha dadaalka aadanaha, si ay u dhexeeya khadadka buuggu noqon doonaan: siyaasiyiinta, caanka ah, nuncios, madaxda sare iyo xataa madaxda boqortooyada. Waxaa xusid mudan, in kasta oo dhinacyo badan oo taariikhi ah oo caan ah laga hadlayo, qoraalku waxa uu leeyahay nuxur aan la daabicin taasi waxay la yaabi doontaa in ka badan hal.
Buuggu waxa uu ka kooban yahay 16 cutub oo tobaneeyo sheeko oo nuxurkoodu kala duwan yahay lagu qaybiyo. Waxaan goob joog u noqon doonaa: dagaallo, halgan wadaaddo, rabshado ka dhacay magaalooyinka... Sheekooyinkaas waxaa ka mid ah:
"Empire State, saqafka New York"
"Claudica oo ka badbaaday Claudio"
"Santiago, cashuur ururiyaha aan dhergin"
Waa curintii qoraaga ee qaybta sheeko-suugaaneed. Riwaayaddan ayaa ka sheekaynaysa Hooyadii, Antonia, oo ahayd haweenay dunida timid markii Spain ay ku jirtay xaalad adag. - horraantii 1930-kii. Shaqadan, Concostrina waxay rabtay inay bixiso dhammaan haweenka u halgamay nolol wanaagsan carruurtooda intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka iyo sanadaha soo socda.
Qoraaga, bog ka bog, ayaa ka warramaya dhibaatooyin badan oo qoyskiisa soo maray intii uu korinayey hooyadii, iyo sida ay tani u dhacdayka dib, is dulsaaray joogto ah caddayn in nolosha is baray. Sida caadada u ah qoraaga, sheekadu waxa ay ku beerlaxawsatay kaftan iyo taabasho kaftan ah, tani si ay u yara dabciso xaaladihii dhiigu ku daatay ee ay ahayd in ay ka sheekeeyso.
Taariikhda dhibka ku jirta: 5 caan ah, 4 heer sare ah, iyo Cress (2021)
Kani waa buuggii ugu dambeeyay ee Concostrina. Warbixin kooban oo ku saabsan nolosha toban qof oo caan ah oo taariikhda calaamadeeyay ayaa qoraalka lagu sheegay.. Qoraagu waxa uu ku nuuxnuuxsaday halgankii fikradeed ee halgan kasta oo ka mid ahaa marxaladihii kala duwanaa ee ay ahayd in uu ku guulaysto. Miguel Ángel, Marie Curie, Cervantes, Oscar Wilde, Isabel de Braganza iyo Fernando VII waa qaar ka mid ah jilayaasha laga helay khadkooda.
Shaqada -oo ilaalinaysa qaabka qosolka leh ee qoraaga - waxaa iska leh nooca dhallaanka / dhalinyarada. Wareysi lala yeeshay Efe, Concostrina ayaa faallo ka bixisay: "Marka aan qoro qoraalka jilaha, uma maleynayo in ay tahay madadaalo, kaliya waxaan raadiyaa sheekooyin xiiso leh" Sheeko kasta waxaa kaabaya tusaalayaal Alba Medina Perucha.
Sheekooyinka buugga ku jira waxaa ka mid ah.
"Sidee Michelangelo ku dhammaatay inuu noqdo David aabbihiis, farshaxan uusan bilaabin"
"Cervantes in uu maxaabiis ahaan"
"Isabel de Berganza abuuraha El Prado"
Ku saabsan qoraaga, Nieves Concostrina
Nieves Concostrina Villarreal waxay ku dhalatay Talaadadii, Ogosto 1, 1961 magaalada Madrid, Spain. El Xusuus-qorka 16 Waxay ahayd dugsigiisa saxaafadda, halkaas oo uu ka shaqeeyay 1982 ilaa 1997. Ka dib, waxa uu sii watay shaqadiisa warbaahinta kale ee telefishinka, sida Antena 3. Waxa kale oo uu ka soo dhalaalay garoonka raadiyaha isagoo leh: "Polvo Eres" by 5 Radio iyo "Ma ahan maalin uun" by 1 Radio.
Sannadkii 2005 waxay soo bandhigtay shaqadeedii ugu horreysay ee qoraa ahaan: ... oo ciid baad noqon doontaa, buugga sawirka epitaph. Intaa wixii ka dambeeyey waxa uu daabacay siddeed shaqo oo kale, oo lagu kala soocay qaab-dhismeedkooda iyo kaftankooda gaarka ah. Qoraallada kale ee qoraagu:
Quijostorias yar (2016)
Aan dhammaystirnayn ee la soo dhaafay (2018)
Abaalmarinada la siiyay Nieves Concostrina
Aqoonsiga shacbigu muu noqon mid ka fog qoraaga. Waa kuwan abaalmarinno kale oo uu helay:
2005 XX Andalusia Prize for Journalism, ee habka raadiyaha, ee Junta de Andalucia
2010 Paradores de España Abaalmarinta Sheekada Gaaban ee Caalamiga ah
2010 Boqorka Spain Abaalmarinta Caalamiga ah ee Saxafiyiinta Raadiyaha
2010 makarafoonka dahabiga ah oo ay bixiso Xiriirka Isbaanishka ee Idaacadaha iyo Ururada Telefishinka
2021 Abaalmarinta Haweenka Horumarka leh ee qeybta Dhaqanka, oo ay bixiso Xiriirka Haweenka Horumarka
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Nieves Concostrina: buugaagta